Ideal Marriage | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : ပီတိ (စိတ်ပညာ) - Wednesday, July 2. 2008
ကိုယ်အိမ်ထောင်ဘက်က အတွေးအခေါ် ရင့်ကျက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်မှသာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်မှု ကူညီမှုတွေ ပေးနိုင်မှာပါ။ စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ ဘာကိုမဆို အလေးအနက်မတွေးတတ် ၊ ပြသနာတွေကိုလည်း မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မဖြေရှင်းတတ်တဲ့ အပြင် အရာရာမှာလိုက်ပြီး သ၀န်တို စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေမှာမို့ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် လက်တွဲဖော်မရဘဲ trouble maker သာ ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွဲဖော်ရှာတော့မယ်ဆိုရင် သူဟာ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့သူ ဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ အလေးအနက်ထား
အချိန်ယူ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ချစ်သူဘ၀မှာတော့ သ၀န်တိုတာလေးကပဲ ချစ်စရာ၊ အိမ်ထောင်လည်းကျရော သဘောထားသေးသိမ်တယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် အလိုလိုရောက်သွားတတ်တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မညာမိစေဖို့ သတိထားရင်း အမှန်အတိုင်း ချစ်သူကို လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Defined Tags : Essay
တွန်းအား . . .
ချစ်တတ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်
Random Entry: ပန်းတပွင့်ရဲ့ သင်ခန်းစာ။
< တမိုးလောက် ဖြိုးဖျောက်ပြီးချိန်တော့.... | ဝိုင်... "ဒါပေမဲ့ " >
demon on Monday, July 21. 2008 :
gypsy on Sunday, February 1. 2009 :
ayan kaung par tal . naung ko lal ae lo myo myar myar poh pay par kha byar. kyay zu lal ayan tin par tal . naut htet laldhtet po pee amyar gyi yay naing par say.
In reply to [ Top level ]#1: demon on 2008-07-21 11:23 #2: gypsy on 2009-02-01 13:20